Rakipeo Radio Ambulante amin’ny teny Espaniola – mpikambana GV roa nahazo ny Lokan’ny zava-baovao! · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Jona 2019 4:01 GMT
Nahazo ny lokan'ny Asa Fanaovan-gazety Gabriel García Márquez amin'ny sokajy Zava-baovao ny Radio Ambulante, rakipeo sy fandaharana onjam-peo amin'ny teny Espaniola izay mitantara ireo tantara Amerikana Latina avy any amin'ny toerana rehetra izay ampiasana ny teny Espaniola, anisan'izany i Etazonia. Nokarakarain'ny FNPI (Orina Mpanasoa Gabriel García Márquez ho an'ny Asa Fanaovan-gazety Vaovao Iberoamerikana) ity loka ity, ary iray amin'ireo lokan'ny asa fanaovan-gazety sarobidy indrindra any Amerika Latina .
Voninahitra ho ahy ny miasa ho toniandahatsoratra sy mpamokatra ho an'ny ekipa mpanao gazety sy toniandahatsoratra ahitana ilay mpikambana mpiara-miasa GV Luis Trelles. Samy mientanentana izahay ny hanohy famokarana sy famoahana ny rakipeo fitantara amin'ny endrika lava ho an'ny Radio Ambulante. Mihamitombo hatrany ny mpihaino anay satria miha-maro ny olona mampiasa ny teny Espaniola mianatra momba ny fandraketana rakipeo sy ny fitantarana amim-peo, ary efa nanampy anay sahady ity loka ity tamin'ny fahazoana mpihaino vaovao. Afaka mihaino ireo tantara rehetra ao amin'ny Radio Ambulante ianao ato .